Kenya oo sheegtay in la kordhinayo howlgallada Ciidamadooda ka wadaan Soomaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Kenya oo sheegtay in la kordhinayo howlgallada Ciidamadooda ka wadaan Soomaliya
Kenya oo sheegtay in la kordhinayo howlgallada Ciidamadooda ka wadaan Soomaliya
Taliyaha Ciidanka Difaaca Kenya Janeraal Walter Koipaton ayaa booqday ciidamada Difaaca Kenya ee ka tirsan AMISOM, kuwaas oo ku sugan meelo kamid ah Gobolka Jubbada Hoose, sida Afmadow, Taabta, Hoosingow, Bilis Qooqaani, Dhoobley, Girile iyo degaano kale.
Intii uu ku guda jiray booqashada oo laba maalmood ahayd ayuu Taliyaha u mahadceliyay ciidammada naftooda, u huray u adeegidda Bulshada iyo difaca dalkooda hooyo, sidoo kalena Ciidamada ay kordhin doonaan howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya.
“Taliska KDF wuxuu ogyahay dadaalkiina ee ilaalinta midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Kenya, kor u qaadidda nabadda iyo amniga gobolka. Dadaalladan waxay gacan ka geysteen yareynta dhaqdhaqaaqyada cadowga,” ayuu yiri” Gen Koipaton mar uu la hadlayay askarta ku sugan degmada.
Isagaoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa u ku bogaadiyay ciidamada sida ay dadka deegaanka uguala Shaqeeyeen aagaga ay ka hawlgalaan iyaga oo adeegsanaya Hawlaha Iskaashiga Militari ee Madaniga, kuwaas oo muhiim u ah nabadda iyo horumarka.
Taliyaha Qeybta Labaad ee AMISOM Brigadier Jeff Nyagah – oo ku weheliyay booqashadiisa Taliyaha Ciidanka Kenya – ayaa sheegay in kasta oo ay adag tahay jawiga hawlgalka haddana ay ciidamadu weli ku dhiiran yihiin in ay qabtaan hawlahooda si waafaqsan waajibaadka AMISOM. Wuxuu kaloo xusay in ciidamadu ay horumar wanaagsan ka sameynayaan xaqiijinta nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.
Previous articleErdogan oo sheegay inay Kooxda Daacish tahay khatar ku soo fool leh Caalamka
Next articleUganda oo fashilisay weerar lagu qaaday Aaska Sarkaal kasoo Shaqeeyay Somalia